Iplagi-esecaleni kwiphakheji yecala, iPhakheji yeIki ePhambili- iJitai
Ukuphuhlisa kunye nokuvelisa izinto zonyulo kunye neephakeji zentsimbi
I-Yixing City Jitai Electronics Co, Ltd.yasekwa ngo-1998. Ubungakanani ngoku abasebenzi ungaphezulu kwe-150 ezibandakanya iingcali ezingaphezu kwama-50. Kule minyaka, siye sazinikela kuphando lwezenzululwazi kunye nokuveliswa kwempahla yesinyithi yeekhompyuter. Thembela kwitekhnoloji yakho yokuphuhlisa ngamandla iphakheji yoluntu. Sihlola imarike yaphesheya kwaye ifezekisa uphuhliso olude.
Sinobuchwephesha obomeleleyo bokugawula iqela labasebenzi abanamava kunye neenjineli zesayensi ezinamandla okuphucula. Kwaye sinobuchule obuvuthiweyo bokuyila iphakheji yesinyithi kwaye sixhobise ngezixhobo ezipheleleyo zokuhlola imveliso.Sineemveliso ezingaphezulu kwe-20 zamalungelo abucala agunyazisiweyo nelungelo elilodwa lomenzi. Sithathwa njengeshishini lobuchwephesha obuphezulu kurhulumente.
Iimveliso ziyasebenza kwimimandla enje ngenqwelomoya, inqwelo moya, izixhobo zombane kunye nonxibelelwano kwezomkhosi nakwezorhwebo. Inkampani yenze inqanaba lophathiswa leeprojekthi zophando lwezenzululwazi, kwaye yamkelwe ngabasebenzisi.
Inkampani inabasebenzi abali-150 kunye namagcisa angama-50
Amalungelo awodwa omenzi wechiza ogunyazisiweyo angaphezulu kwama-20
Ngo-2020, ixabiso lonyaka lenkampani li-100 yezigidi
Iimveliso ziyasebenza kwimimandla enje ngenqwelomoya, inqwelo moya, izixhobo zombane kunye nonxibelelwano kwezomkhosi nakwezorhwebo.
IXABISO LEZIPHUMO ZONYAKA
282020 / Sep
Ingxoxo ye-Mid-Autumn yokuFunda kwabafundi beKholeji kwi2020 ...
Umxholo wale ntlanganiso ujonge izimvo ezivela kuJack Ma, umseki weAlibaba
Ingxoxo ye-Mid-Autumn yokuFunda kwabafundi beKholeji kwi2020
Ngo-Septemba wama-29, ngo-2020 iJitai Electronics Co., Ltd ibibambe i-Mid-Autumn Coversazione yomfundi wasekholejini ngo-2020 yenye yezona zinto zilungileyo kum ...
Intlanganiso yoKhuseleko loMsebenzi
Ngomhla kaMatshi 1, 2020 iJitai Electronics Co, Ltd yabamba intlanganiso yokhuseleko lomsebenzi ngoveliso lwemveliso. ukwenza isicwangciso solungiselelo lwalo nyaka kukhuseleko lomsebenzi. Ukufika ...
Ukuphuhliswa kunye nokuPhuculwa kweMveliso yePhepha leSinyithi leziXhobo zoMbane
Uphuhliso kunye nokuPhuculwa kwePhepha leSinyithi labaNxibelelanisi boMbane ngoFebruwari 25,2020, iSebe leMakethi eJitai Electronics Co, Ltd ...